Nye gị WordPress Site Somefọdụ ọkụ | Martech Zone
Wenezde, August 28, 2013 Wenezde, August 28, 2013 Douglas Karr
Anọ m na-ele anya ruo oge ụfọdụ maka ngwa mgbakwunye nke ga-egosipụta ngụkọta na mmetụta nke isiokwu anyị na mgbasa ozi mmekọrịta. Onu ogugu di nkpa… Ha bụ ihe na-egosi ntụkwasị obi, ikike na ewu ewu. Ọ bụrụ n’inwere isiokwu nwere ọtụtụ mbak, ndị folks ga - agụkarị isiokwu a - ma yikarịrị ka ha ga - ekekọrịta ya.
Tinye Ọ dị ọkụ. Ikekọrịta mmekọrịta dị mkpa, yana ịmepụta azịza mara mma maka ya bụ ihe Flare gbasara. Zuru oke maka blọọgụ, saịtị akụkọ na onye ọ bụla nwere ọdịnaya nke ekwesịrị ịkekọrịta, Ọkụ bụ elekọta mmadụ nkekọrịta ngwa ọ dị anyị ka ya bụrụ na anyị nwere.
Flare bụ ederede ederede nke ọma Ntinye ngwa ngwa na egosiputa ihe mara mmadụ na-ekere òkè mmanya. Ọkụ na-eweta ihe ngosi pere mpe na enweghị nhịahụ maka ịkekọrịta mgbe ọ ka dị ire na ịnya ụgbọ ala na ụmụazụ. Flare zara onye na-agụ ya ma soro onye ọrụ ya na-agagharị ka ha na-agagharị na ọdịnaya. Enwere ike ịhazi ọkụ iji zute ebumnuche gị na mmasị ndị na-ege gị ntị.
Flare dị ugbu a na beta ma ị nwere ike ibudata ma wụnye ya na WordPress n’anaghị akwụ ụgwọ. Ndi mmadu meputara Flare mere oru puru iche n'idebe ogwe aka ndi mmadu ngwa ngwa - wee weghachite data echekwara dika tinye meta data n'ime ntinye WordPress. Anyị nwere ike ịmata ndị na-agbanwe agbanwe ma jikọta ha ozugbo na peeji nke anyị na ibe anyị - na-enye ihe ngosi mara mma nke ewu ewu isiokwu ahụ.
N'ihe banyere post a, ọ bụ naanị oghere 34 fọdụrụ iji zụta ọkụ maka $ 79 - nke ahụ bụ $ 100 na ndenye aha afọ 1 nke Flare ozugbo ọ na-apụ na beta na ndị edemede emelitere ya na atụmatụ ndị ọzọ!
Tags: emailnjali eludị kantụtụretweetnkekọrịta mmanyammekọrịta mmadụ na ibe yasụọ ngọngọ
Ezigbo post Doug! Daalụ maka ịkekọrịta ndụmọdụ dị oke mma…
Ị nzọ! Na m nnọọ hụrụ a sinik elu nke ọhụrụ ha usoro nke ikpo okwu agnostic…. ihe dị mma!
Sep 14, 2013 na 11: 27 AM
Ee! Agụrụ m banyere agnostic ikpo okwu ma nwee mmasị na ikpo okwu n'onwe ya nwere ike ịkpụzi ka esi akọ akụkọ transmedia!